Skype kuqhathaniswa Face isikhathi
NgoJuni 11, 2020 ngu Umhlahlandlela Wokuqondisa Shiya umbono
Ukuxhumana okunempumelelo sibalulekile ukubaluleka ezweni lanamuhla. Kuphakathi ofuna ukukhuluma kubangani nomndeni noma sewufuna ehlangene nabasebenzi zebhizinisi lakho, udinga ithuluzi ephelele ezingakusiza ukuze ifeze izimfuneko yakho.
Esikhathini esedlule, abantu asetshenziswa ukwenza mail ukuze uxhumane nabanye, kodwa manje abantu bakhetha ukwenza zevidiyo ngokusebenzisa ingxoxo yevidiyo ezisekelweni. Ukuze nokuxhumana okusebenza kahle, izinkampani eziningi ziye umkhankaso wabo isiqophi sefoni zokusebenza akuvumela ukuba amakholi kusukela kuphi emhlabeni wonke.
Phakathi zonke lezi isofthiwe interactive, Ama-app ezimbili Bengilokhu waziqonda 'uzekwayo emazweni. Lezi zinhlelo zokusebenza ezimbili umbango kabanzi waqaphela njengoba Face Time and Skype.
Ngokuthakazelisayo, zombili izinhlelo zokusebenza (Ubuso Isikhathi Skype) enzelwe inhloso elifanayo nalapho izikhulu abasebenzisi zabo ukuze uthole emphakathini esebenzayo, ukwenza umsindo noma amakholi wevidiyo, ukwenza imiyalezo, Ukushaya izingcingo zomhlaba iqembu levidiyo nokunye okuningi.
Ungakwazi kalula usebenzisa lezi zinhlelo zokusebenza kumadivayisi ezahlukene kubandakanya Smartphones zakho, amaphilisi, ideskithophu, amafasitela, inkulumo lokubuka, ngomakhalekhukhwini nama-iPod futhi abaningi.
Lezi zinhlelo zokusebenza ingxoxo yevidiyo eziye zakwenza kwaba lula astoundingly kubo bonke abasebenzisi ukuba ixhunywe nomunye ngemizuzwana kungakhathalekile esifundeni, ibanga noma isikhathi. Bazenzelé ukwazi ukujabulela amaholide yakho noma ukugxila uhambo lwakho yebhizinisi ukuhlale exhumene nomndeni wakho, kubasebenti nobe emakhasimende. Zombili izinhlelo zokusebenza kukhona ephathekayo kakhulu, ikhasimende friendly futhi ukulawuleka.
kodwa namanje, zikhona izici zayo okuyinto ukuhlukanisa lezi zinhlelo zokusebenza komunye nomunye. Kulesi sihloko, uzothola imininingwane umqondo izici yokuncintisana, ezingeni kwedivayisi, ukuhlanganiswa, kanye nekhwalithi kokubili Skype kanye Face Time. Lesi sihloko ngeke akuvumele ukunquma ukuthi iyiphi amasudi isofthiwe ngokugcina ngokuvumelana nezidingo zakho.
0.1 mayelana Skype:
0.2 Ukufaneleka of Skype:
1 Izici Skype
1.1 Ukudidiyelwa Skype
1.2 Ikhwalithi Skype:
1.3 Mayelana ne-Face Time:
1.4 Ukufaneleka of Face Time:
2 Izici Face Time:
2.1 Ukudidiyelwa Face Time:
2.2 Quality Isici Face Time:
Omunye luvame kakhulu futhi olindele kunazo video umhlangano zokusebenza kuba Skype. Lolu hlelo lokusebenza waqale sethulwa ngo 2003 futhi ngemva kweminyaka embalwa e 2011 Microsoft Inkampani walithenga. Microsoft benza leli dili e $8.5 bhiliyoni. Umqondo oyinhloko yale softhiwe ukuvumela abasebenzisi bayo ukuqhuba isiqophi angenamkhawulo namakholi alalelwayo.
Ngaphezu kwalokhu, Skype futhi linikeza amakhasimende ayo isevisi imiyalezo umunyu elithakazelisayo futhi stickers. Skype ubelokhu egxile ukugcwalisa mfuneko kwamakhasimende walo. Ngenxa Imiphumela yayo yi kahle ngamakhasimende, Skype sihlangabezane ukunqoba omkhulu.
Nge nenchazelo eliphezulu umsindo namakholi wevidiyo, Skype idonse kakhulu isabelo izingcingo zomhlaba jikelele. Njengoba sinazo zonke lezi amasevisi Amazing, Skype uye wakwazi ngempumelelo ukwenza igama layo ngo ezahlukene enkantolo futhi amanqampunqampu.
Ukufaneleka of Skype:
Omunye izinzuzo enkulu Skype, lolu hlelo lokusebenza usebenzela kumadivayisi amaningi. Awunazo ukuhlala elinganiselwe ngenkathi usebenzisa le umhlangano lokusebenza isiqophi. Okunikelwe nezinkonzo Skype nifaka wonke amadivayisi kuhlanganise omakhalekhukhwini, amafasitela, amakhompyutha, amaphilisi, namanye amadivayisi platform game.
Ngenxa amasevisi zayo elikhulu kwedivayisi, Skype has amakhasimende eminingi ye-Sony, Google Station, Ama-smartphone, amafasitela, OS X amadivayisi, Android, BlackBerry, Symbian, Samsung Smart TV, njll.
ekuqaleni, Skype lwenzelwe ukunikeza umsindo izingcingo inketho amakhasimende ayo. Kodwa ngemva ukufuneka kakhulu kanye izitayela ekushintsheni yokuxhumana, kamuva kwaqala ukunikela osheshayo ukulayeza namakholi wevidiyo emhlabeni.
Ngokungafani Face Time, Skype hhayi yakhelwe ukunikeza kuphela isiqophi intanethi noma amakholi alalelwayo. It ikuvumela ukuba ushayele ubani oku ngocingo lwasendlini noma ifoni izinombolo. Lesi sici eziwusizo ngempela ukufinyelela bonke abantu lapho uxhumano lwe-inthanethi ayiyinhle noma kancane.
Ukuze ividiyo ku-inthanethi noma amakholi alalelwayo, Skype enza icala lutho. Kodwa uma ufuna ukubiza inombolo yamazwe ngamazwe, Inombolo yeselula noma inombolo yolayini, ke kufanele ukhokhe imali ukuthenga. Skype inikeza izinhlelo ezikhangayo ukuze ubhalisele yamakholi ngaphandle kwe-intanethi.
Ukulinganisela ziyahlukahluka kuxhomeke esifundeni sakho kanye lwemali. Singacabanga Skype njengenhlangano ehlukile yolayini kodwa namanje, lolu hlelo lokusebenza ngeke ukwazi ukwenza njengalelo kwaso indawo. Omunye Isizathu esiyinhloko awukwazi ukwenza amakholi aphuthumayo ngokusebenzisa Skype.
Ukuze wenze i-Skype, ungasebenzisa noma i-Wi-Fi internet uxhumano noma idatha yakho yenethiwekhi yeselula. Ukuze uqale ukusebenzisa i-Skype, kufanele ube i-id yakho yeMicrosoft imeyili noma i-Skype ID. Uma uyobe ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Skype, uzothola contact uhlu osuvele enakekelwa isofthiwe.
Wena nje kufanele uchofoze umsebenzisi ofuna ukumshayela. Unga cinga oxhumana nabo oyifunayo ngokubhala igama lakhe kubha yokusesha. Ungenza uhlu contact yakho esetshenziswa kakhulu ngokungeza nabo izintandokazi.
Phakathi ikholi yevidiyo yakho, Skype linikeza ongakhetha multiple kuhlanganise thulisa ucingo, inkinobho yekhamera, izwi kuphela mode futhi uvala ucingo. Skype futhi ilethe amasevisi imiyalezo interactive kakhulu kubasebenzisi bayo.
Ukuze yobumfihlo, Skype ikuvumela ukuba ukuvimba noma ukususa oxhumana naye. Ngaphezu kwalokhu, futhi uvumela ukuba indiva isicelo umyalezo noma yiluphi uhlobo lokusetshenziswa uma ungazi naye.
Kuphakathi ungumsebenzisi OS X noma i-iOS umsebenzisi; ungakwazi ukufinyelela ikheli izincwadi bakho noxhumana nabo ngokusebenzisa i-Skype. Skype Ungadlulisela phambili izingcingo kunoma iyiphi inombolo ofuna. Ungakwazi asebenzise le sevisi ngokuthenga Skype credit. Skype ngokuphelele isiteji video umhlangano evumela abasebenzisi ezahlukene zamadivayisi ukuze zixhunywe usebenzisa isofthiwe olulodwa.
Ngeshwa, Skype ayinikezi izinga ezinhle umsindo namakholi wevidiyo. Ngezinye izikhathi, ngisho uma usebenzisa ngesivinini internet, usengakwazi nazo isinqumo ongaphakeme futhi shuttering namakholi wevidiyo.
Lezi zinkinga ziyinkimbinkimbi nakakhulu uma uzama ukusebenzisa Skype ngesikhathi ngezimpelasonto. Isizathu langempela, Skype anikeza izinkonzo zalo kuwo wonke amadivayisi futhi ngenxa inombolo engenamkhawulo abasebenzisi, abantu ubhekene nesimo izinga. Into enhle is iqembu Skype basebenzela ukuxazulula le nkinga ukuze wenze amaklayenti wanelisekile.
Mayelana ne-Face Time:
Ubuso Isikhathi ingenye isofthiwe abavelele eyenza abasebenzisi bayo bejabule futhi benelisekile njalo. Le software isiqophi sefoni ukuthi Apple sethulwa ngo 2011. Le software iye ngokukhethekile yakhelwe ukwenza lula Apple abasebenzisi kudivayisi kuhlanganise iPads, iPhones, ngomakhalekhukhwini nama-iPod, futhi Macs ukuhlala kuyasebenzisana bajabulele ividiyo kanye alalelwayo ekusebenzisaneni.
Ubuso Isikhathi ujabulela isinqamu enkulu amaklayenti wanelisekile. Ngokusho kocwaningo, Ngaphezu kwe 70 abayizigidi ezingu-OS X abasebenzisi ne-iOS abasebenzisi ukuthatha kosizo Face Isikhathi ukukhuluma nabanye abasebenzisi.
Ukufaneleka of Face Time:
Ungasebenzisa kuphela ukusebenzisa le software kumadivayisi we-Apple. Kufanele ube Mac noma i-iOS idivayisi ngamakhamera phambili ebhekene ukuqala ikholi yakho yevidiyo Face Time. Ubuso Isikhathi has kwedivayisi elinganiselwe futhi kuphela kufinyeleleke Apple. Ungaqala ukusebenzisa Face Time uma unanoma iluphi uhlobo okulandelayo
-iPad 2 noma kamuva,
iPhone 4 noma kamuva
4isizukulwane th iPod noma kamuva
Mac OS X 10.6.6 futhi kamuva
Uma kwenzeka amadivayisi wakho ungenayo i ikhamera e-eyakhelwe, khona-ke kumelwe unamathisele web an ikhamera yangaphandle ukuqala kokuqhuba namakholi wevidiyo.
Izici Face Time:
ekuqaleni, Ubuso Isikhathi ivumela amakhasimende ayo ukuzuza amasevisi zayo ngokusebenzisa noxhumo lenethiwekhi Wi-Fi kuphela. Kodwa nge intuthuko kanye kwemvelo ubuchwepheshe, ke liye lanikeza amaklayenti ayo ukusebenzisa le app ngokusebenzisa idatha amanethiwekhi amaselula kanye.
Enye inzuzo ukuncintisana Face Time, ngokungafani Skype ungenayo ukuya ngenqubo yokusingatha akhawunti yakho. Uma uqale ukusebenzisa Face Time, ihlanganise ngokuzenzakalelayo futhi synchronizes yonke idatha edingekayo yekheli amabhuku noxhumana nabo ye-iOS kanye nabasebenzisi OS X.
Ubuso Isikhathi Kulula kakhulu ukusebenzisa. Uma ucindezela inkinobho ukubeka ucingo lwakho, ungabuka ongakhetha ahlukahlukene ewusizo kuhlanganise inkinobho yekhamera, Ukuthulisa imakhrofoni noma ukuqeda ucingo lwakho. Apple ayinikezi amakhasimende VOIP yayo namasevisi Skype ukwenza.
Ukudidiyelwa Face Time:
Apple ine onqenqemeni ukuhlanganisa kokubili software ephezulu ukusebenza hardware amasevisi isiqophi sefoni. Ubuso Isikhathi siklanyelwe imiphumela A-uchungechunge "uhlelo ku-chip" nekhamera iSight. Ukunikeza imiphumela ebalulekile isiqophi namakholi alalelwayo, Ubuso Isikhathi akusho usebenze nanoma yimuphi ukudluliswa kwedatha kuphansi ukuxhumana.
Apple uye belwela kanzima njalo ukuletha ikhwalithi ye-premium futhi okumangalisayo zokusebenza yi-ngamakhasimende amakhasimende ayo. Ubuso Isikhathi Futhi wenzelwe ne ifilosofi efanayo Apple, awukwazi ukuthola abampofu isiqophi amaphutha kanye izwi lehla ngesikhathi yokuxhumana nawe. Ubuso Isikhathi lwakhiwe ngokuvumelana semvelo emhlabeni Apple.
Quality Isici Face Time:
Apple uye wagcizelela njalo izinga nobuhle amasevisi abasinikezayo. Lesi ngiso sizatfu sekufa ngenxa okuyinto Face Time has izinga elihle ukwedlula esincintisana yayo Skype. Ubuso Isikhathi inikeza eliphezulu isiqophi sefoni amasevisi asekeleke namazinga amazwe omhlaba.
Ngoba kokubili isiqophi namakholi alalelwayo, Ubuso Isikhathi inikeza kahle ichazwe, ungaphazanyiswa, umsindo ecacile nesithombe echichima motion bushelelezi.
Lolu hlelo lokusebenza ngendlela emangalisayo Face Time evumela ukuba wenze izinkumbulo zethu amahle, ukuba uhlale uxhumekile futhi ukuba badlulisele izigijimi.
Abantu abehla nokukhulumisana ngokukhululekile izinga nakho kubalulekile uma une-into ebaluleke ngempela ukuba adlulisele, noma ufuna ukunikeza intshumayelo yakho noma ufuna akholise iklayenti lakho nge ukuthengisa iphimbo kanye uhlu kuqhubeka.
Ubuso Isikhathi Skype, kokubili izinhlelo zokusebenza Amazing for beqhuba isiqophi noma umsindo izingcingo. Uma ungumsebenzisi we-Apple kudivayisi futhi ufuna ukuzwa izinga ayetholakala ke kufanele usebenzise Face Time.
Ngokuphambene, uma ufuna ukuba exhumene nabantu ngaphandle kwezwe Apple ke Skype best choice eqondile ngawe.